TRUTH AND PEACE: အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခု
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 12.3.09
ုသားအဖ ၂ ယောက် မြို့ပြညတွေ ခါးသီးစွာဖြတ်သန်းရင်း အလွမ်းများ.. သီချင်းကို တူတူညည်းကြရင်း .. ဘ၀အမောတွေကနေ ပြေကြပါစေ...
အစ်ကိုရေ... ကာတွန်းစာအုပ်ဆိုတာ နည်းနည်းလေး နဲ့ ဖတ်မ၀ဘူး.. တူမလေး ပြောတာ အမှန်ပဲ..
ကျနော်လာမှ စာအုပ်တွေယူခဲ့မယ်.. ဂစ်တာလည်း ကူတီးပေးမယ်..တစ်ယောက်တည်းသမားဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှောက်သွားမယ် စိတ်ကူးထားတယ်..
သားအဖနှစ်ယောက် ပျော်ရွင်ပါစေ. ကာတွန်းစာအုပ်တွေ များ၂ပေးဖတ်လိုက်ပါ ဒီအချိန်ကကျောင်းပိတ်ချိန်လေ ကိုဥပသကာ.
စာအုပ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ အေးချမ်းပါတယ်ရှင်--
gold lotus9@gmail.com said...
အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခု ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်းကို ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လာဖတ်သွားပါတယ် ။
နှစ်ယောက်တည်းဆိုပေမယ့် .. သီချင်းနဲ့ လမင်းရှိရင်.. ပြီးပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ မိသားစုလေး ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ။
ကျွန်တော့်မှာတော့ ကလေးတွေအဆင့်ကနေ မြေးတွေကို ဥပသကာ အခုအတွေး-အလုပ်မျိုးလုပ်နေရတယ်။ အကြီးဆုံးက ၁၀ တန်းဖြေနေတယ်လေ။ စာမေးပွဲဖြေရတဲ့ကျောင်းကို အပို့-ပကြိုလုပ်နေရတယ်။ နှစ်ဘာသာတော့ပြီးပြီ။
နေရာသီအတွက် ဒီမှာ ယဉ်ကျေးမှု-ဘာသာရေး သင်ပေးစရာမရှိပါ။
သူတို့ကျောင်းကို အသားငါးမယူဘူးတဲ့။ ငါးပိ-ငန်ပြာဝေလာဝေး။ ဆန်(ထမင်း)စားတာတောင် အထင်သေးသတဲ့။
တခါက ဗမာပြည်ပြန် မိတ်ဆွေအိမ် မဲဇလီဖူးသုတ် သွားပေးပါတယ်၊ သိပ်ကောင်းတယ် ဆရာ။ (ချတ်တနီး)နဲ့ ရောစားလိုက်သတဲ့။
ကလေးတွေအဖို့ အတုခိုးစရာကလဲ ဗမာမဟုတ်တာတွေချည်းဘဲ။ တတိုင်းပြည်ထဲကနေ လာကြတာ မှန်ပေမဲ့ အဖိုး-အဖွါး-အမိ-အဖတွေနဲ့ နောက်ခံမတူတဲ့ လူမျိးစုတွေက အများစုကြီး။
ဆီပြန်စာတဲ့အရပ်ကလာပေမဲ့ ကလေးတချို့ ဆီမပါ-ဆားမခပ်တဲ့ အပြုတ်ကို ကြိုက်နေကြရရှာတယ်။
ကျွန်တော်တောင်မှ ချင်းနဲ့ထောင်တဲ့ငြုတ်သီးထောင်း ဆီမဆန်းတာကို ခံတင်းတွေ့နေပြီဗျို့။
ဗဟုသုတကြွယ်မယ့် သမီးကောင်းရတနာလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်နေရတာ သိပ်ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်... ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဖေချစ်တဲ့သမီးဆိုတော့ ဒီပို့စ်ထဲက ဖခင်မေတ္တာကို ခံစားရင် အဖေ့ကိုလွမ်းသွားမိတယ်...